अब अल्लु अर्जुनको पुरानो फिल्म नै हिन्दीमा आउँदै, बलिउड रिमेकलाई चुनौती :: सेतोपाटी कला :: Setopati
मुम्बई, माघ ४
'पुष्पाः द राइज' को हिन्दी संस्करणको अपार सफलतापछि अल्लु अर्जुनको एउटा तेलेगू फिल्म पनि हिन्दी भाषामा डब हुने भएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टुडेका अनुसार पुष्पाले उत्तरी भारत र अन्य ठाउँमा पाएको सफलता देखेपछि अल्लुको फिल्म 'अला वैकुन्ठपुरमलो' को हिन्दी संस्करण बनाउने निर्णय निर्माताहरूले गरेका हुन्।
अला वैकुन्ठपुरमलो नयाँ फिल्म भने होइन। यो सन् २०२० मै रिलिज भएको फिल्म हो र यसले दक्षिण भारतमा राम्रो सफलता पनि पाएको थियो।
अहिले पुष्पाले उत्तरी भारतका हलमा तहल्का मच्चाएको देखेपछि अला वैकुन्ठपुरमलोका निर्माण टोलीले यसलाई हिन्दीमा डब गरेर फेरि रिलिज गर्ने भएका हुन्।
यो फिल्म हिन्दी भाषामा भए पनि यसको नाम भने फेरिने छैन। यो अला वैकुन्ठपुरमलो नाममै रिलिज हुने बताइएको छ। हिन्दी अला वैकुन्ठपुरमलो आगामी जनवरी २२ मा रिलिज हुने पनि इन्डिया टुडेले लेखेको छ।
अल्लु अर्जुनको फिल्म हलमा लाग्ने भएपछि यही समय आसपास रिलिज हुन लागेका बलिउड फिल्मलाई चुनौती हुने अनुमान पनि फिल्म समीक्षकहरूको छ।
यसमा सबभन्दा धेरै समस्या कार्तिक आर्यन र कृति सेननको मुख्य भूमिका रहेको 'शेहजादा' लाई पर्ने अनुमान छ। किनकी शेहजादा अला वैकुन्ठपुरमलोकै हिन्दी रिमेकका रूपमा बनिरहेको फिल्म हो। शेहजादा सन् २०२२ नोभेम्बरमा रिलिज हुने भनिएको छ।
फिल्म बजार विश्लेषक रमेश बालाले भने शेहजादालाई अला वैकुन्ठपुरमलोको हिन्दी संस्करणले खास प्रभाव नपार्ने बताएका छन्।
बालाका भनाइ उद्धृत गर्दै इन्डिया टुडेले लेखेको छ- अला वैकुन्ठपुरमलो ठूलो स्तरमा रिलिज हुन लागेको होइन भन्ने लाग्छ। यो फिल्मका मुख्य टोलीले अनुगमन पनि गर्दैनन् होला। त्यसैले यसको रिलिज सानो स्तरमा मात्र हुने देखिएको ट। त्यसैले यसले कार्तिक आर्यनको फिल्मलाई खास असर नपार्ला। शेहजादा र अला वैकुन्ठपुरमलोका हिरो नै फरक छन्, हिरोइन फरक छन् र गीत फरक हुनेछन्।'
उनले अल्लु अर्जुनको चर्चा बढिरहेका बेला थप कमाइ होस् भनेर मात्र अला वैकुन्ठपुरमलो रिलिज गर्न लागेको पनि बताएका छन्।
अर्का फिल्म समीक्षक तरन आदर्श भने यसमा सहमत छैनन्। शेहजादालाई दर्शकले अला वैकुन्ठपुरमलोसँग तुलना गर्ने भएकाले प्रभाव पर्ने उनले बताएका छन्।
अल्लुका प्रशंसक र लोकप्रियता पछिल्लो समय अझै धेरै बढेको भन्दै उनले भनेका छन्, 'पुष्पाले पूरै भारतीय फिल्म उद्योगमा तहल्का मच्चाइसकेको छ। हलिउड फिल्म स्पाइडर म्यानः नो वे होमलाई समेत पछि पारिदियो। यही रन्कोमा अब अल्लु अर्जुनको अला वैकुन्ठपुरमलो हिन्दी भाषामा डब भएर आउँदैछ। अहिले बजारमा नयाँ फिल्म पनि छैनन्। यो मौकामा अला वैकुन्ठपुरमलोले सफलता पाउने सम्भावना धेरै छ।'
उनले थप भनेका छन्, 'अला वैकुन्ठपुरमलो राम्रो फिल्म हो। यसका निर्देशक त्रिविक्रम तेलेगू फिल्म उद्योगका उत्कृष्ट ५ मध्येका एक हुन्। यो फिल्म उनका राम्रामध्ये एक हो। त्यसैले यसबाट धेरै आशा राख्न सकिन्छ।'
यही कारण पनि बलिउड रिमेक शेहजादालाई अल्लुको फिल्म अला वैकुन्ठपुरमलोले प्रभाव पार्ने सम्भावना धेरै रहेको उनले बताएका हुन्।
पुष्पा फिल्मको कुरा गर्दा यसले सबै भाषामा गरी ३ सय २५ करोड भारूभन्दा बढी कमाइसकेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ४, २०७८, ०३:५७:००
जब सलमान, कट्रीना र रणवीरको जम्काभेट भयो
'धाकड' असफल भएपछि कंगनाले घोषणा गरिन् 'इमरजेरन्सी'
पाँच दिनमा ‘भूल भूलैया २’ले कति कमायो?
विजय देवराकोन्डा र सामन्था घाइते भएका हुन्?
'राजनीति २' बन्ने, सँगै देखिएलान् रणवीर र कट्रिना?
‘बेबी डल’ गायिका कनिकाले गरिन् बिहे